Gumi Enhetembo Dzakanakisisa Nezve Hupenyu Dzakatombonyorwa - Blog
Gumi Enhetembo Dzakanakisisa Nezve Hupenyu Dzakatombonyorwa
Nhetembo huru inokwanisa kuburitsa zvakanyatsorehwa nemusoro wenyaya wayo - uye kana zvasvika kune hupenyu, ndiko kunonetsa kwazvo.
Kutora chimwe chinhu chakasiyana kwazvo, asi icho chinotisunga pamwechete sehama nehanzvadzi muzvombo zvinotora hunyanzvi chaihwo nehunyanzvi.
Neraki kwatiri, vadetembi vakanakisa kuburikidza nemazera vakanyora yakawanda yakawanda uye yakanaka vhezheni kutibatsira kunzwisisa - kwete decipher - hupenyu mukubwinya kwese.
Heano gumi enhetembo dzakadzama uye dzine musoro nezve hupenyu. Mamwe marefu, mamwe mapfupi, mamwe ane mukurumbira, mamwe akaderera kudaro.
Kana uchitarisa pane mbozhanhare, tinokurudzira kushandura iyo skrini mamiriro kuti uone fomati chaiyo yenhetembo imwe neimwe paunenge uchiiverenga.
1.Pisarema reHupenyu naHenry Wadsworth Longfellow
Iyi nhetembo ine mutinhimira ndiyo mbichana inogona kumisikidza moto mukati mako. Zvinokudenha kuti ubude uye rarama hupenyu hwako mune ino nguva se “ gamba ”Uye siya chiratidzo chako pane ino nyika.
Chiito! Tora Chiito! Shingairira!
Usandiudza, nenhamba dzinochema,
Upenyu hachisi chiroto chisina chinhu!
Nokuti mweya wakafa unotsumwaira,
Uye zvinhu hazvisi izvo zvavanoratidzika.
Hupenyu chaihwo! Hupenyu hwakasimba!
Uye guva harisi iro chinangwa charo
Zvauri guruva, unodzokera kuguruva,
Hazvina kutaurwa nezvemweya.
Kwete kunakidzwa, uye kwete kusuwa,
Mugumo wedu wakatarwa kana nzira
Asi kuti uite, kuti rimwe nerimwe mangwana
Tsvaga isu kure kupfuura nhasi.
Unyanzvi hwakareba, uye Nguva inopera,
Uye mwoyo yedu, kunyange yakasimba uye yakashinga,
Zvakadaro, kunge madhiramu asina kugadzirwa, ari kurova
Mariro anofora kuenda kuguva.
Mumunda wakafara wepasi rose wehondo,
Mune bivouac yeUpenyu,
Usava semombe mbeveve, inotinhwa;
Iva gamba mukukakavara!
Usavimba neRamangwana, howe'er inofadza!
Rega vakafa kare vaviga vakafa vayo!
Ita, -ita muPenyu Ino!
Mwoyo mukati, uye Mwari musoro!
Hupenyu hwevakuru vakuru zvese zvinotiyeuchidza
Tinogona kuita hupenyu hwedu hukuru,
Uye, kuenda, siya shure kwedu
Tsoka pajecha renguva
Tsoka, kuti pamwe imwe,
Kufamba nechikepe hupenyu hupenyu hwakakosha,
Hama yakasuwa uye yakaputsika nechikepe,
Kuona, kunotora moyo zvakare.
Nemoyo kune chero njodzi
Zvichiri kubudirira, uchiri kutsvaga,
Dzidza kushanda uye kumirira.
2. Mugwagwa Usina Kutorwa naRobert Frost
Hupenyu hunoumbwa nekuteedzana kwesarudzo. Iyi nhetembo ine mukurumbira inotangira paforogo munzira ine matanda uye inoisa muverengi munzira 'imwe' senzira yekutsanangura kuti tinofanira kusarudza nzira imwe chete kwete kuzvinyongonoka muhupenyu.
Kunyangwe tichienda nenzira ipi, hatigone kufanoona kuti ichatisvitsa kupi, kana kuti imwe yacho yaizosvika sei.
Tinogona kuita nepatinogona napo kuita sarudzo dzakanaka, asi isu hatife takaziva zvechokwadi kuti yakaipa sei kana nani imwe nzira ingave yanga iri. Uye saka, hatifanire kudemba nzira isina kutorwa.
Migwagwa miviri yakatsauswa mune yeyero huni,
Uye ndine urombo kuti handina kukwanisa kufamba zvese
Uye uve mufambi mumwe, ndakamira kwenguva refu
Uye ndakatarisa pasi imwe kure kwandaigona
Ikoko kwayakakotamira pasi pegwenzi
Wobva watora imwe yacho, seyakanaka,
Uye uine pamwe kuda kuri nani,
Nekuti yaive huswa uye yaida kupfeka
Kunyangwe sekudarika ikoko
Ndakanga ndavapfekedza chaizvo zvakafanana,
Uye vese mangwanani iwayo zvakavata zvakaenzana
Mumashizha hapana nhanho yakanga yatsikwa nhema.
Oo, ndakachengeta yekutanga kune rimwe zuva!
Asi uchiziva nzira inotungamira munzira,
Handina chokwadi kana ndaizombodzoka.
Ini ndichave ndichiudza izvi nekugomera
Kune imwe nzvimbo mazera nemazera saka:
Nzira mbiri dzakatsauka mudondo, uye ini--
Ini ndakatora iyo yakambofamba zvishoma,
Uye izvo zvakaita mutsauko wese.
3. Kana - naRudyard Kipling
Hupenyu huchakuomera - panyama, nepfungwa, nemweya uye pamweya. Iyi nhetembo inodaidzira kuti iwe utsungirire, ramba uchidarika, uye ukwire pamusoro pematambudziko auchasangana nawo.
It rinokurudzira , rinokurudzira, rinopa muenzaniso wekutevera. Zvakafanana nesipi yehupenyu - uye inopa chikafu chinogutsa.
Kana iwe uchikwanisa kuchengeta musoro wako kana zvese nezve iwe
Vari kurasikirwa yavo uye vachikupomera iwe,
Kana iwe uchikwanisa kuzvivimba iwe apo vanhu vese vanokukahadzika,
Asi ita mvumo yekusahadzika kwavo futi
Kana iwe uchikwanisa kumirira uye usaneta nekumirira,
Kana kunyeperwa nezvako, usatarisana nenhema,
Kana kuvengwa, usapa nzira yekuvenga,
Uye zvakadaro usatarise zvakanyanya kunaka, kana kutaura zvine hungwaru:
Kana iwe uchikwanisa kurota-uye usaite zviroto tenzi wako
Kana iwe uchigona kufunga-uye usaite kuti pfungwa dzive chinangwa chako
Kana iwe uchikwanisa kusangana neKukunda uye Njodzi
Uye bata vanyengeri vaviri zvakafanana
Kana uchigona kutsungirira kuti unzwe chokwadi chawataura
Kumonyorwa nemapfumo kuita musungo kumapenzi,
Kana tarisa izvo zvinhu zvawakapa hupenyu hwako, zvakaputswa,
Uye kukotama nekuvaka 'em kumusoro nematurusi akasakara:
Kana iwe uchikwanisa kugadzira murwi mumwe wezvese zvaunowana
Uye uzviise panjodzi pane imwe nguva yekukanda-uye-kukanda,
Uye kurasikirwa, uye kutanga zvakare pakutanga kwako
Uye usambofema izwi pamusoro pekurasikirwa kwako
Ukakwanisa kumanikidza moyo wako uye tsinga uye sinew
Kushandira yako nguva refu mushure mekunge vaenda,
Saka saka batisisa kana pasina chinhu mauri
Kunze kwekuda iyo inoti kwavari: 'Batisisa!'
Kana iwe uchikwanisa kutaura nemapoka uye chengetedza kunaka kwako,
Kana kufamba neMadzimambo-kana kurasikirwa nekubata kwakajairika,
Kana pasina vavengi kana shamwari dzine rudo dzisingakwanise kukukuvadza,
Kana vanhu vese vachiverenga newe, asi hapana zvakanyanya
Kana iwe uchikwanisa kuzadza iyo isingakanganwire mineti
Nenhanho yemasekonzi makumi matanhatu 'kumhanya,
Rako ndere Nyika nezvose zvirimo,
Uye-izvo zvinowedzera-iwe uchave uri murume, mwanakomana wangu!
4. Usaende wakapfava muhusiku ihwohwo hwakanaka naDylan Thomas
Rufu hazvidzivisike, uye sekutaura kunoita detembo iri ('kufa' kuri 'kusviba'), ndizvozvo. Asi munyori anotikurudzira kuti tisazvipira kurufu zvakare nyore uye kurwira hupenyu 'kusvika pakufema kwekupedzisira.
Izvo zvinotiyeuchidza nenzira ine simba uye inonyengetedza kuti hupenyu hwadarika uye isu tinofanirwa kushandisa yakawanda yenguva yatinayo papasi rino.
Usaende zvinyoro muhusiku ihwohwo hwakanaka,
Kuchembera kunofanira kupisa nekupenga pakuvira kwezuva
Hasha, hasha pamusoro pekufa kwechiedza.
Kunyange varume vakachenjera kumagumo avo vachiziva kuti rima rakarurama,
Nekuti mazwi avo anga asina forogo mheni ivo
Usaende wakapfava muhusiku hwakanaka ihwohwo.
Varume vakanaka, yekupedzisira wave nekuchema, kuchema kupenya kwakadii
Mabasa avo asina kusimba angangodaro akatamba munzvimbo yakasvibirira,
Varume vemusango vakabata nekuimba zuva vachitiza,
Uye dzidza, kunonoka, vakaishungurudza munzira yayo,
Varume vemakuva, padyo nerufu, vanoona nekupofomadza kuona
Meso mapofu anogona kupenya semameteor uye ave ngochani,
Uye iwe, baba vangu, ipapo pakakwirira kusuruvara,
Tuka, ndikomborere, ini zvino nemisodzi yako inotyisa, ndinonamata.
5. Desiderata naMax Ehrmann
Iyi nhetembo yeprozi yakafanana nebhuku redzidziso rehupenyu. Inosimudzira zvakanyanya uye inosimbisa hupenyu sechinhu chinofanirwa kufamba nacho kuvimbika netsitsi.
Inobata munzvimbo zhinji dzehupenyu kubva kuhukama hwedu nemabasa kusvika pakukwegura uye kugadzikana kwepfungwa.
sei kuudza musikana anokufarira chaizvo
Chokwadi, yakadzika uye ine chirevo chinoumbwa dai paimbove neimwe.
Enda wakadzikama pakati peruzha uye nekuchimbidza, uye rangarira runyararo rungave rwuri mukunyarara. Sezvinobvira, pasina kuzvipira, iva unowirirana nevanhu vese.
Taura chokwadi chako chinyararire uye zvakajeka uye teerera kune vamwe, kunyangwe kune vakagomara uye vasingazive ivo vane nyaya yavo.
Dzivisa vanhu vane ruzha uye vane hukasha ivo vanotsamwira mweya. Kana iwe ukazvienzanisa iwe nevamwe, unogona kuve usina maturo kana kuvava, nekuti nguva dzose pachava nevanhu vakuru uye vashoma kupfuura iwe.
Nakidzwa nezvawakaita pamwe nezvirongwa zvako. Ramba uchifarira rako wega basa, kunyangwe richizvininipisa ipfuma chaiyo mukuchinja kwenguva yenguva.
Chenjerera mune rako bhizinesi zviitiko, nekuti nyika izere nehunyengeri. Asi izvi ngazvirege kukutadzisa pane kunaka kune vanhu vazhinji vanovavarira kuita kwakakwirira, uye kwese kwese hupenyu hwakazara nehugamba.
Iva zvauri. Kunyanya usanyepedzera kuva nerudo. Usave unotsoropodza nezverudo pamberi pehukama hwese nekusagadzikana zvinongogara sehuswa.
Tora nemutsa kuraira kwemakore, nenyasha uchipa zvinhu zvehudiki.
Ita simba remweya kuti rikudzivirire mune kamwe kamwe njodzi. Asi usazvinetse nekufungidzira kwakasviba. Kutya kuzhinji kunozvarwa nekuneta uye kusurukirwa.
Kunze kwechirango chakanaka, zvinyorove pachako. Iwe uri mwana wepasi rose hapana pasi pemiti nenyeredzi une kodzero yekuve pano.
Uye uye kana zviri pachena kwauri kana kwete, hapana mubvunzo pasi rose riri kuzaruka sezvaraifanira. Naizvozvo iva nerugare naMwari, chero zvaunomufungira kuva zvaari. Uye chero chipi chaunoshanda uye zvishuwo, mune nyonganyonga yehupenyu, chengetedza runyararo mumweya mako. Nayo yese sham, kudhakwa uye kuputsika zviroto, ichiri nyika yakanaka. Iva anofara. Edza kuva anofara.
6. Zororo naW. H. Davies
Iyi nhetembo pfupi haigone kuve yakanangana nenyika yanhasi kana ikaedza. Inotipa zano rekuti tipe nguva yeku 'mira uye titarise' kana, mune mamwe mazwi, kunonoka uye nekucherechedza runako rwese rwakakukomberedza.
Usarega nyika ichimhanya pasina ziviso vhura maziso ako uone - kunyatsoona - iri mukubwinya kwayo kose. Ita nzvimbo muhupenyu hwako yechiito chakareruka chezororo.
Chii chinonzi hupenyu uhu kana, uzere nehanya,
Hatina nguva yekumira takatarisana.
Hapana nguva yekumira pasi pematavi
Uye tarisa sekureba segwai kana mhou.
Hapana nguva yekuona, kana matanda apfuura,
Iko tsindi dzinoviga nzungu dzadzo muhuswa.
Hapana nguva yekuona, masikati machena,
Hova dzakazara nenyeredzi, sedenga usiku.
Uye tarisai tsoka dzake, matambiro avanogona kuita.
Hapana nguva yekumirira kusvikira muromo wake wagona
Pfumisa kunyemwerera uku maziso ake akatanga.
Hupenyu husina kunaka izvi kana, uzere nekutarisira,
7. Mukana naBerton Braley
Unogona kuzvibvunza kuti chii chinangwa chehupenyu kana zvese zvaunoita uchidzokorora zvakaitwa nevamwe pamberi pako. Iyi nhetembo inoshumira kutiyeuchidza kuti nyika hainete kusika uye kuti iwe uri musiki.
Iyo inotaura nezve zviito zvikuru uye zviito zvikuru, asiwo zverudo nerudo uye kuseka uye kuvimbika - zvinhu izvo murume kana mukadzi wese anokwanisa.
Koshesa izvo zvaunazvo kuti ubatsire kune ino nyika.
Uine kusahadzika uye kutya iwe wakarohwa
Iwe unofunga kuti hapana mukana kwauri, mwanakomana?
Sei, mabhuku akanakisa haana kunyorwa,
Mujaho wakanakisa hauna kumhanya,
Iwo akanakisa mamaki haasati aitwa izvozvi,
Rwiyo rwakanakisa haruna kuimbwa,
Mutinhimira wakanyanya hausati waridzwa,
Shinga, nekuti nyika idiki.
Hapana mukana? Nei nyika ichingoda chete
Kune zvinhu zvaunofanira kugadzira,
Iro dura repfuma yechokwadi richiri shoma,
Izvo zvinodiwa hazviperi uye zvakanaka,
Inoshuva simba rakawanda nerunako,
Kuwedzera kuseka uye rudo uye kudanana,
Kuwedzera kuvimbika, basa uye basa,
Hapana mukana- sei pasina chimwe asi mukana!
Kune iyo yakanakisa ndima haisati yaimbwa nhetembo,
Imba yakanakisa haina kurongwa,
Iyo yepamusoro soro haina kukwirwa zvakadaro,
Nzizi dzine simba kwazvo hadzina kutsemurwa,
Usatombo kunetseka uye kushushikana, kushaya simba,
Nekuti mabasa akanak kwazvo haasati atangwa,
Basa rakanakisa harina kuitwa.
8. Chii Chinofanira Hupenyu naPat A. Fleming
Kutsika kubva pamabasa akakurumbira uye echinyakare, tinowana dombo iri renhetembo nemunyori weamateur (zvinongoenda kuratidza kuti chero munhu anogona kugadzira zvidimbu zvine chirevo chikuru).
Zvakawanda senge idzo nhetembo dzinozivikanwa pamusoro, inotitaurira kuburikidza nemabatiro atinofanira kuedza kuita hupenyu hwedu. Zviri nyore, asi zvinokurudzira.
Kudzidza uchiri mwana
Kuti hupenyu uhwu hunofanirwa kuve chii.
Kuti ndizive zvinopfuura kupfuura ini,
Zvakanyanya kudarika ini.
Kupona panguva dzakaomesesa.
Kutarisana nenguva idzodzo dzakazara nemarwadzo,
Uye uchiri kugona kuva nemutsa.
Kurwira avo vasingakwanise ivo pachavo,
Kugara ndichigovana mwenje wangu.
Pamwe chete nevaya vanodzungaira murima,
Kuti ndide nesimba rangu rose.
Kuramba wakamira neushingi,
Kunyangwe ndakamira ndega.
Kuramba uchisimuka uye kutarisana zuva rega rega,
Kunyangwe pandinonzwa kusurukirwa.
Kuedza kunzwisisa iwo
Izvo hapana ane hanya nazvo kuziva.
Uye ita kuti vanzwe vamwe kukosha
Kana nyika yavarega vachienda.
Kuti uve anchor, yakasimba uye yechokwadi,
Munhu iyeye akavimbika kusvika kumagumo.
Kuti uve chinhu chinogara chiripo chetariro
Kumhuri yangu neshamwari dzangu.
Kurarama hupenyu hwehunhu,
Kugovana moyo wangu nemweya wangu.
Kugara ndichiti ndine hurombo
Kana ndakuvadza vese shamwari nemuvengi.
Kudada neuyo wandakaedza kuva,
Uye hupenyu uhu ndakasarudza kurarama.
Kuita zvakanakisa zuva rega rega
Nekupa zvese zvandinofanira kupa.
Kwandiri ndizvo zvinofanirwa kuve hupenyu huno,
Kwandiri ndizvo zvazviri.
Kutora zvandapihwa naMwari
Uye zviite zvakanyanya kuwanda
Kurarama hupenyu hwakakosha,
Kuve mumwe munhu akakosha kwazvo.
Kuda uye kudiwa mukudzoka
Uye ita chiratidzo changu paPasi.
9. Chii Chinonzi Hupenyu Hwedu? naSir Walter Raleigh
Iyi ndiyo nhetembo ipfupi pane irondedzero pamitsetse gumi chete, asi inonyudza kuti sei hupenyu haufanire kukosheswa . Pane kudaro, munyori anoratidza kuti hupenyu mutambo uye kuti nyika ndiyo nhanho yedu.
Saka chii chatinofanira kuita? Ita zvakanaka. Ita kuti vanhu vaseke. Tamba chikamu chedu munyika kusvikira keteni rawa uye isu tobva muhupenyu huno.
Hupenyu hwedu chii? Mutambo weshungu.
Mufaro wedu? Mimhanzi yekuparadzanisa:
Matumbu evanaamai vedu dzimba dzinonetesa dzive,
Kwatiri takapfekerwa hupenyu hupenyu hupfupi.
Ivhu pasi danho Denga muoni ari,
Ndiani anogara uye anoona uyo anoita chiito chisina kunaka.
Makuva anotivanza kubva kuzuva rinopisa
Zvakafanana nemaketeni akadhirowewa kana mutambo wapera.
Saka tichiridza post isu kuzororo redu razvino,
Uye zvino tinofa zvine mutsindo, kwete mukuseka.
10. Vavaki naHenry Wadsworth Longfellow
Takatanga nhetembo yemunyori uyu saka tichaguma neimwe. Pano, isu tinodzidziswa kuti hupenyu hunogara pamusoro pezvivakwa zvenguva uye kuti zviito zvedu nhasi zvinopa ramangwana redu.
Isu tiri vavaki uye vavaki vehupenyu hwedu uye kana tichida kuwana yedu yega vhezheni yekubudirira, isu tinofanirwa kuisa mukushanda nesimba nesimba.
Vese vagadziri veMagumo,
Kushanda mumadziro aya eTime
Vamwe vane zviito zvakakura uye zvikuru,
Vamwe vane zvishongo zve rhyme.
Hapana chisingabatsiri chiri, kana chakaderera
Chinhu chimwe nechimwe munzvimbo yacho chakanakisa
Uye izvo zvinoita senge zvisina basa
Inosimbisa uye inotsigira iyo yasara.
Nguva ine zvinhu zvakazadzwa
Yedu kune-mazuva uye zuro
Ndiwo mabhuroko atinovaka nawo.
Chimiro uye fashoni izvi
Siya pasina mipengo yekuyamura pakati
Funga kwete, nekuti hapana anoona,
Zvinhu zvakadai zvinoramba zvisingaonekwi.
Mumazuva evakuru eArt,
Vavaki vakashanda nehanya zvakanyanya
Wese miniti uye chisingaonekwe chikamu
Nekuti vanaMwari vanoona kwese kwese.
Ngatiiteiwo basa redu futi,
Zvese zvisingaonekwe nezvinoonekwa
Gadzira imba inogara Mwari,
Akanaka, akazara, uye akachena.
Zvimwe hupenyu hwedu hauna kukwana,
Ndakamira mumadziro aya eNguva,
Akatyoka masitepisi, uko tsoka
Kugumburwa sezvavanotsvaga kukwira.
Vaka kune nhasi, saka, yakasimba uye chokwadi,
Nesimba rakasimba uye rakakwana
Uye kukwira nekuchengetedzeka
Mangwana unowana nzvimbo yayo.
Saka tega tinogona kuwana
Kune idzo turrets, uko ziso
Anoona nyika sebani rimwe rakakura,
Uye kungosvika kusingagumi kwedenga.
ndinofanira here kutumira musikana mushure mezuva
ungaziva sei kana iwe uchikwezva
mukomana wangu haambodi kupedza nguva neni
zvinhu zvekuita kana iwe uchifinhwa kumba
kudanana nemunhu asingakudi
nzira yekuisa miganho muhukama